Iyo Apple Watch ndiyo inotengesa zvakanyanya smartwatch pasi rose, inopfuura Fitbit | Ndinobva mac
Iwo anogara achiburitswa manhamba pane Apple Watch kutengesa fungidziro dzimwe nguva zvinokanganisa. Apple haisati yamboburitsa zviri pamutemo kutengesa kuri kugadzirwa neiyo smartwatch yayo, uye pamwero uyu zvinoita sekunge isingazomboiti, hatizive kana iri nekuti haina kufarira kana nekuti haudi kuona kuti uyu musika uchiri wakasvibira kwazvo. Icho chiri chechokwadi ndechekuti makambani akasiyana nguva nenguva anoburitsa mishumo mavanoreketa fungidziro yekutengesa zvinoenderana nezvikamu zvakasiya zvivakwa zvinogadzirwa nemidziyo.
Chirevo chazvino chinoratidza kuti Apple yanga iri pamusoro pechinzvimbo, pamusoro paFitbit naXiaomi, aimbove madzimambo emusika uyu, kunyangwe makambani aya asinganyatso kupa mawatch akangwara asi kuti anopa mabhenji ekuverengera, kunyanya iyo yakasimba yeChinese mavambo.
Pakati pechikamu chekutanga chegore, Apple yawana chikamu chemusika che15,9%, Kuva kambani yakatumira zvakanyanya zvigadzirwa. Pachinzvimbo chechipiri tinowana Xiaomi, iine 15,5%, iyo inomiririra kudzikiswa kwe5% kana ichienzaniswa nenguva imwecheteyo gore rapfuura. Panzvimbo yechitatu tinoona kuti matambudziko eFitbit akawedzera sei, izvo zvakabva pakuva nemugove we24,7% kusvika pa13,2% chete panguva imwecheteyo gore rapfuura.
Kana isu tichitaura nezvezvikwata zvakatumirwa, tinoona sei Apple yabva pakutakura mamirioni 2,2 mayunitsi mukota yekutanga yegore rapfuura kuenda pamamirioni 3,5 zvikamu zvekota yekutanga ya2017. Xiaomi yabva kubva pamamirioni 3,8 kuenda ku3,4. Ipo Xiaomi yaenda kubva kuendesa mamirioni e4,5 mamayuniti kusvika angangoita mamirioni matatu mauniti akatumirwa mukati mekota yekutanga ya2017.
Kutengesa kweApple Watch, AirPods uye Beats Apple inosanganisira ivo muchikamu zvimwe zvigadzirwa kufanana nePod, pasina kuputsa zviyero zvekutengesa zveimwe yeizvi zvigadzirwa chero nguva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Iyo Apple Watch ndiyo inotengesa zvakanyanya smartwatch pasi rose, inopfuura Fitbit
Maitiro ekumanikidza kurega kunyorera paMacBook Pro 2016, kana iyo Kubata Bhawa isiri kupindura